WARARKII WARGAYSA OGAAL EE MAANTA OO AXAD AH 08/02/209 | Toggaherer's Weblog
SH.SHIIRIIF OO KULAN LA YEESHAY MAXAKAMADAHA ISLAAMIGA AH XUBNO KA SOCDA.
WARARKII WARGAYSA OGAAL EE MAANTA OO AXAD AH 08/02/209
“Waxaa asaasi u ah oo khasaarahana keenay saddexda xisbi ee maanta dalka ka jira.”
“Waxaa dhacday inay saddexda xisbi markii Xukuumadda waqtigeedii dhammaaday u kordhiyeen waqti ku meel-gaadh ah, doorashadii dawladdaha hoose-na daaqada ay ka tuureen”
Hargeysa (Ogaal) – Koox isku dhaf ah oo ka kooban Aqoonyahano iyo saraakiil ka mid ah hogaamiyayaasha Ururkii SNM oo ay horkacayaan Xil. Maxamed Xaaji Maxamuud Cumar-Xaashi iyo Muj. Ibraahin Cabdillaahi Xusseen (Dhegoweyne), ayaa shalay ku dhawaaqay urur-siyaasaddeed cusub.
Xaflad loo sameeyay ku dhawaaqista ururkan oo lagu magacaabo ururka Dimoqraadiyada iyo horumarinta isbedel-doonka Somaliland (UDHIS) oo lagu qabtay Hoteel Obama ee magaalada Hargeysa, waxay kusoo bandhigeen sababaha keenay aasaaska ururkan. Qoraal lix bog ka kooban oo ay xubnahani halkaas ka akhriyeen, waxay ku faahfaahiyeen sababaha ku kelifay samaynta ururkan, sida uu ku aasaasmay, qorshahooda siyaasaddeed iyo aragtidooda xaaladda guud ee xilligan Somaliland ku jirto. “Ururka Dimoqraadiyadiyo horumarinta isbedel-doonka Somaliland,
waa urur ka abuurmay dood-cilmiyeed dheer iyo baadhis fara badan oo ka soo maaxatay aqoonyahanada iyo waxgaradka reer (ka tirsan) Somaliland. Dooddaas oo ay ku bahoobeen aqoonyahano jooga dalka gudahiisa iyo debadiisa, Mujaahidiintii SNM, Culimo-awdiin, Madax-dhaqameed, ururada bulshada, ururada dhalinyarada, ururada haweenka, ganacsato, garabyo ka go’ay Kulmiye, UCID, UDUB iyo qaar saddexdaba ka madaxbanaanaa.
Dooddaas oo muddo dheer socotay, waxaa lagaga doodayay wadciga maanta uu dalku ku sugan yahay oo ay ka dhalan karto xaalad aad u xun oo macnaheedu noqonayo in raadkii arooryo dib loo raaco, waayo hay’addihii dawliga ahaa ayaa noqday fadhiid oo shaqayn waayay, sida Fulinta ama Xukuumadda, Xeer-dejinta iyo Garsoorka, xataa Komishanka oo maanta aynu arkayno halka xaaladiisu marayso.
Dhibaatadani haddii ay sii socoto waxaa dhici karta burbur baahsan oo ku yimaada qaranka Somaliland, waxaana tacab khasaare noqonaaya halgankii dheeraa ee ay umaddani u soo martay isku qaranimadeedii iyo geedi-socodkii Dimoqraadiyadda ee umadda reer Somaliland raacday kuna heshiisay.” Sidaa ayaa lagu yidhi qoraalkaas.
Waxay kaga hadleen nidaamka siyaasiga ah ee Somaliland iyo hab-dhaqankiisa xilligan, isla markaana waxay iftiimin ka bixiyeen muranada soo dhexgala Xukuumadda iyo Sharci-dejinta (Baarlamaanka) iyo sharciyan siday tahay inay u wada shaqeeyaan iyo weliba siday u kala madaxbanaan yihiin saddexda Waaxood ee dawladdu ka kooban tahay.
Sidoo kale, xubnaha aasaasay ururka UDHIS, waxay qoraalkoodaa kaga hadleen xisbiyada siyaasadeed Somaliland iyo doorka ay ku leeyihiin xaalada dalka ee ay kooxdani ka dayrisay.
“Dhibaatadan waxaa asaasi u ah oo khasaarahan keenay saddexda xisbi ee maanta dalka ka jira, sababtoo ah waxay noqdeen sidan soo socota:-
1-Inay keligood dalku u xidhnaado oo aan xisbiyo kale ku soo biirin
2-Inay taladu u xidhnaato hogaamiyaha xisbiga oo qudha, go’aankana aan cid kale la wadaagin.
3-In aan doorasho xalaal ahi ka dhicin xisbiyada dhexdooda sida hogaamiyaha xisbigu jecelyahayna wax loo maamulo, dantooda gaarka ahna ay ka horaysiiyeen danta guud.
4-Inay markay doonaan ay isu kordhiyaan, iyadoo taasi hore u dhacday sharcina aanay u lahayn inay arrintaa ku kacaan, ayna ahayd mid sharci daro ah, waxaana sharci u leh inay kordhiyaan goleyaasha Sharci-dejinta, waxaase dhacday inay saddexda xisbi markii Xukuumada waqtigeedii dhammaaday u kordhiyeen waqti ku meel-gaadh ah, doorashadii dawladdaha hoose-na daaqada ay ka tuureen oo aan ilaa maanta la mudaynin meel ay jaan iyo dhicib dhigtayna aan lahaynin, iyadoo ay sharci ahayd inay kasoo horayso ta Madaxtooyada.
5-Xisbiyada iyo Xukuumadduba waxay ku guuldaraysteen kobcintii iyo geedi-socodkii Dimoqraadiyadda, wacyigelintii dadweynaha iyo dhismihii xisbiyada iyo Xukuumadda dhexdooda.
6-Waxay kale oo ay ku guuldaraysteen inay wax horumar ah dhinacnaba ka sameeyaan, taasoo sababtay in la waayo wixii loo doortay inay qabtaan, halkaasna ay ku luntay kaalintii loo baahnaa inay ka qaataan u adeega, kobcinta, wacyigelinta siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee bulshada reer Somaliland,” sidaas ayaa lagu yidhi war-murtiyeedkaas ay soo saareen xubnaha ku dhawaaqay ururka UDHIS.
Sidoo kalena, waxay qoraalkaa kaga hadleen arrimo door ah oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo arrimo kale, isla markaana waxay naqdiyeen hanaanka Xukuumaddu u maamusho dhakhliga dalka.Hase yeeshee, mar Weriyeyaashii ka socday Saxaafadda Maxaliga ah ee munaasibadaa ka qaybgalay waydiiyeen xubnaha UDHIS aasaasay, sababta ay xilligan ku dhawaaqista ururkooda ugu soo beegeen maadaama hore Xukuumaddu isu hortaagtay furashada ururo siyaasaddeed, waxay sheegeen in ku talogalkoodu aanu ahayn inay doorkan uun u ordaan ka qaybgalkooda siyaasadda, balse hadafkoodu yahay sidii ay talada dalka uga qaybgeli lahaayeen mustaqbalka.
“SNM waan ka mid ahaa, SNM-na bani-aadamkay ka mid tahay oo guulna way keentay khaladaadna way leedahay…Hadday SNM timaado khaladaad bay yeelanaysaa, maalin walbana khalad baa taagan, sharcigeenuna ma dhama.” Sidaa waxa yidhi Ibraahin-Dhegoweyne oo ka jawaabayay su’aal laga waydiiyay in ururkan ujeedadiisa lala xidhiidhin karo SNM, maadaama xubnaha ururkan aasaasay qaarkood ka mid ahaayeen.
Sidoo kale mar la waydiiyay in ku dhawaaqistooda ururkani sababi karto in Xukuumaddu kula kacdo talaabadii ay hore xabsiga ku dhigtay hogaamiyeyaashii ururkii Qaran, waxa uu Muj. Dhegoweyne ku jawaabay, “Haka yaabin (Xadhig lanagula kaco)…Taasi waa taan ka dagaalamay, meel xun baanay tegi.”Xubnahan ku dhawaaqay urur siyaasadeedkan cusub ee UDHIS waxay intooda badan hore uga tirsanaayeen xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE, isla markaana may jirin meel ay kaga dhawaaqeen inay ka baxeen xisbigaas.
Sidaa darteed, Ibraahin Dhegoweyne oo la waydiiyay goorta uu ka baxay Kulmiye iyo ku dhawaaqista ururkan ka hor inay haboonayd inuu cadeeyo inuu Kulmiye ka baxay, waxa uu si kooban u yidhi, “Waar maantaba qoro waan ka baxaye, saacadaa la joogo….Horena waan uga baxay, imikana waan ka baxay Kulmiye oo ma ahiye sidaa ku ogaada.”
Muqdisho: Sheekh Shariif oo lagu qaabilay Mashxarad laga danbeysiiyay Madaafiic
Muqdisho (Reuters/Ogaal)- Madaxweynaha dhawaan loo doortay Somalia Shariif Sh. Axmed ayaa saacad ka dib markii uu shalay gaadhay Magaalada Muqdisho ee Somalia, Xarunta Villa Somalia oo uu deegan yahay lagu Weeraray Madaafiic.
Sida aanu ka soo xiganay Wakaaladda Wararka ee Reuters, Shariif Sh. Axmed oo socdaalkii ugu horreeyay ku tegay Magaalada Muqdisho tan iyo intii loo doortay Madaxweynenimada Somalia, ayaa markii uu ka degay Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho oo lagu soo dhaweeyey, halkaa hadal kooban ku siiyay Warbaahinta ayaa mar kale ku celiyay oo sheegay in uu diyaar u yahay in wada-hadal la galo Kooxaha ka horjeeda. Waxaanu ujeedada Socdaalkiisa Muqdisho ku sheegay sidii uu wada-xaajoodyo iyo wada-hadallo ula yeelan lahaa odayaasha iyo Madax-dhaqameedka Muqdisho. Hase ahaatee, muddo yar markii uu ku sugnaa Xarunta Villa Somalia waxa lagu Weeraray Madaafiic kala duwan, kuwaas oo Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho aanay sheegin wax khasaare ah oo ay geysteen.
Dhinaca kale, Afhayeenka Ciidamada AMISOM ee nabad-ilaalinta Somalia Major Barigye Ba-Hoku oo ka hadlay Weerarka lagu qaaday Aqalka Villa Somalia, ayaa sheegay in Kooxaha Madaafiicda ku weeraray ay uga dan lahaayeen in Hub loogu jawaabo, halkaana ay ka dhalato dhimasho nafeed oo soo gaadha Shacabka. “Umaanu jawaabin, waxay doonayeen in aanu Hub ugu jawaabno, laakiin diyaar umaanu ahayn taas. Waxay doonayeen in ay dhaliil ugu sameeyaan Ciidamada AMISOM in ay duqeeyeen Shacab, waligayana maanu samayn taas.” Ayuu yidhi Major Bo-Hoku oo Khadka Telefoonka ugu waramay Wakaaladda Wararka ee Reuters.
Sarkaal ka tirsan Saraakiisha Amni ee Shariif Sh. Axmed ayaa sheegay in Shariifku uu amar ku siiyay Ciidamada AMISOM iyo kuwiisaba in aanay wax Rasaas ah ku ridin halka lagaga Weeraray Madaafiicda, taas oo uu sheegay in uu uga dan lahaa in laga fogaado dhimasho ka timaadda haddiiba Hub la rido.
Inkasta oo ay Kooxaha la baxay Xisbiga Islaamka hore u shaaciyeen in ay ka horjeedaan Shariif Sh, Axmed iyo dawladda la filayo in uu soo dhiso, islamarkaana ay Dagaal kala hortegi doonaan, haddana ma jirto cid rasmiyan sheegatay in ay Madaafiicda ku weerareen.
“Hadii aan halkaa lagu qaban…waxa xigta distoorka oo uu bedelo iyo weligay kursiga ka degi maayo”
Cabdillaahi Darawal Hargaysa (Somaliland.org) – Garabka Dimuquraadiyad doonka ah ee xisbiga talada haya ee UDUB, ayaa shir jaraa’id oo ay shalay ku qabteen Hoteelka Xaraf ee magaalada Hargeysa, waxa ay ku sheegeen in aanay ka tanaasulayn Mawqifkoodii ahaa inay u sharraxan yihiin jagooyika Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka ee Xisbiga UDUB.
“Shirkan meesha ka dhacay ee garabka dawlada ee UDUB ay sameeyeena mowqifkayagii ayaanu ka taagan nahay oo uma arkayno wax sharci ah, wax nidaam ah iyo wax ay dadnimaba ku jirto, dadka meesha iskugu tagayna waxaanu u aragnaa baaqigii ka hadhay dadkii hanuuninaha ka qeylin jirtay ee durbaanada iyo qeylada khabiirka ku ahaa..” Ayuu yidhi Cabdilaahi.
Cabdillaahi Darawal waxa uu shacbiga reer Somaliland iyo ciddii danaynaysa dalka ugu baaqay inay eegaan cawaaqib-xumida ka iman karta tallaabooyin uu ku tilmaamay fool-xumo oo uu sheegay inay ku dhiiranayaan Madaxwayne Rayaale iyo xukuumadiisu, kuwaasi oo uu ku tilmaamay niman wakhtigoodii dhamaaday oo sharci darro ku jooga.
“Ku-dhaca iyo dhiirrannaanta intaa le’eg ee uu ku beddelay Xeerkii Xisbiga, Reer Somaliland-now haddii aad ka dhiidhiyi-waydaan oo arrinkaa halkiisa lagu qabanwaayo, waxaad ogaataan in uu berri boqor idinku noqonayo, dastuurkana la badalayo,” ayuu yidhi Cabdillaahi Xuseen Iimaan (Darawal), waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi “Xaaladda maanta dalku marayo waa heerkii ay maraysay sannadkii 1980-kii, haddii aan la badbaadina khatar buu galayaa.
”Mujaahid Cabdillaahi Xuseen Iimaan (Darawal) waxa uu tilmaamay in tallaabada Madaxweyne Rayaalle ku maroorsaday talada Xisbiga UDUB, kuna bedellay xeerka xisbiga in ay tahay mid uu ku doonayo sidii uu weligii kursiga uga fadhiyi lahaa.
“Tallaabadan ta xigtaa waa distoorka oo uu bedelo oo uu yidhaahdoi waligay kursiga ka degi maayo” ayuu yidhi Cabdillaahi Darawal.
Mudane Cabdillaahi Xuseen Iimaan (Darawal) ugu danbayntii waxa uu ugu baaqay beesha caalamka, deeq bixiyayaasha iyo wadamada daneeya Somaliland inay soo faro geliyaan arrintan iyo khilaafka Xisbiga UDUB ee ka dhashay shirweynihi 2aad ee Xisbiga UDUB.Cabdilaahi Darawal shirka jaraa’id, waxaa ku wehelinayay Wasiirkii hore arrimaha Gudaha Md. Ismaaciil Aadan Cismaan [Ismaaciil Yare] iyo Xildhibaan Maxamed Nuur Carraale [Duur]
Wasiirada Waxbarashada, Duulista iyo Maaliyadda oo Jaa’isado guddoomay “Nimankiinan Qurba-joogga isku sheegayaw arrintani waa eexasho ”Wasiirka Qoyska “
In Wasiir Maaliyadeed la ogsoon yahay wuxuu qabtay maan filayn, sababtoo ah..”Wasiirka Maaliyadda
Hargeysa (Ogaal)- Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Somaliland ayaa shalay la guddoonsiiyay Shahaado-sharaf lagu maamuusayay waxqabadkoodii Sanadkii 2008, halka Wasiir kale uu ka dhiidhiyay, isla markaana uu arrintaa ku tilmaamay mid eexasho ah oo aanay ku qanacsanayn.
Wasiirada Waxbarashada Xasan Xaaji Maxamuud Warsame (Gadhweyne), Duulista Hawada Cali Maxamed Waran-cadde iyo Maaliyadda Xuseen Cali Ducaale (Cawil), ayaa shalay la guddoonsiiyay Shahaado-sharafyo lagu maamuusayay waxqabadyo ay fuliyeen sanadkii tegay ee 2008. Waxaana Shahaado-sharafyadaa guddoonsiiyay Urur lagu magacaabo Ururka Abaalmarinaha Somaliland (Somaliland Awards Community) oo ay aasaaseen xubno ka mid ah Qurba-joogga Somaliland.
Guddoomiyaha Ururkan Abaalmarinta Somaliland Maxamed Cabdilaahi oo ka hadlay Xafladdii Munaasibadda guddoonsiinta Shahaadooyinka oo lagu qabtay Hutel Ambassador ee Magaalada Hargeysa, ayaa ka warbixiyay ujeedada ay saddexda Wasiir u guddoonsiiyeen Shahaadooyinka.
“Sababaha keenay in aanu ku doorano oo aanu Shahaadooyinkan u siino Wasiradan ayaa ah, Wasiir Waran-cadde waxaynu ognahay in uu wax badan ka qabtay Madaarka Hargeysa, isla markaana markii u horraysay taariikhda uu suurtogeliyay in habeenimo Diyaaraduhu ka haadaan, soona cago-dhigtaan..Wasiir Xasan-Gadhweyne, ayaa isna aanu ku siinay heerka uu Waxbarashada gaadhsiiyay ee ay dalka oo dhan tuulo, Degmo ilaa Magaalo uga socoto ee Dugsiyada looga wada dhisay iyo hirgelinta Jaamacadaha dalka..Wasiir Cawil-na, haddii aynaan haysan Miisaaniyad, may jirteeen Ciidan dalka ilaaliya oo tayo leh, Ammaanka aynu ku faannana ma hirgeleen.” Ayuu yidhi Maxamed, waxaanu intaa ku daray, “Uma jeedno saddexda Wasiir oo kaliya ayaa shaqeeyay, balse waxa jira Wasiiro iyo Xildhibaano shaqeeyay, laakiin dhibco lagaga helay Shahaadooyinkan.”Munaasibaddan oo ay ka qaybgaleen Wasiiro kale, Madax-dhaqameed, Xildhibaano, Aqoonyahanno iyo Marti-sharaf kale, ayaa waxa kale oo ka hadlay, isla markaana Wasiirada Shahaadooyinka guddooonsiiyay X. Cabdi Xuseen Yuusuf (Cabdi-Waraabe), waxaanu ku dheeraaday dardaaran uu u jeedinayay Siyaasiyiinta oo uu ugu baaqay in danahooda Siyaasadeed aanay ku bedelan danta caamka ah ee Dalka.
Isaga oo Bulshadana ugu baaqay in ay doortaan ciddii ay u arkaan in ay ilaalinayaan Nabadda iyo xasillooniada.Sidoo kale waxa isna halkaa weedho kooban oo mahad-naq ah ka jeediyay Wasiirka Maaliyadda oo ku hadlayay Afka Wasiirada la guddoonsiiyay Shahaadooyinka, waxaanu ammaanay labada Wasiir ee Waxbarashada iyo Duulista Hawada oo uu sheegay in ay si wacan u guteen.
Isaga oo sheegay in Wasiir Maaliyo ahaan aanu u filayn in la siin doono Shahaadadan. “In Wasiir Maaliyadeed la ogsoon yahay wuxuu qabtay maan filayn, sababtoo ah dadku waa nin aad Cashuur ka doonayso oo aad waydiisay iyo nin aad hawl u fulin wayday.” Ayuu yidhi Wasiirku.
Intaa ka dib, waxa Mikirifoonka si aan qorshaha ku jirin loogu dhiibay Wasiiradda Arrimaha Qoyska Marwo Faadumo Suudi Xasan ka dib markii ay dalbatay.
Hase ahatee, mahadnaq ay u jeedisay Weriye Muha Daahir Faarax Jire oo ka tirsan TV-ga Qaranka, uguna hambalayaysay jagada Guddoomiyenimada Urur Saxaafadeed ay ku bahoobeen Dalal Afrikaan ah, isla markaana ay kala sinnayd Masuuliyiintii ka horraysay ee hadlay oo iyana u hambalyeeyay ka dib, waxay si aan la filayn dhaleecayn dusha uga saartay Ururka bixiyay Shahaadooyinkan, isla markaana waxay ku eedaysay in ay eexasho sameeyeen oo go’aanka ay ku bixiyeen Shahaadooyinkani uu ahaa mid dhinac ka raran oo aan loo dhammayn.
“Nimankiina Qurba-joogga isku sheegayaa, arrintani (Bixinta Shahaadooyinka) waa arrin eexasho ah. dhawr iyo labaatan Wasiir ayaan ku dhex jiraa oo runtii isma-faaninayo, laakiin Aniga oo ku hadlaya Afka Haweenka in aan wax badan qabtay ayaan u arkaa.
Wasaaraddayda Hawl-wadeenada ka shaqeeya waa loo siman yahay oo Dumarka iyo Ragga Gacmaha midig iyo bidix ayaan u haystaa. Go’aankan dumar kuma jiro ee Rag uun baa iska gaadhay Jaaliyaddaay!. Aniguna waxaan tirtirsiyi doonaa Haweenka Qurba-joogga ah oo aan odhan doonaa cidi waxba idiinma ogola ee ka kaca.” Ayay si kaftan ku dheehan yahay u tidhi Wasiiradda Arrimaha Qoysku.
Ugu dambayntii Wasiirka Xidhiidhka Golayaasha Cabdi Xasan Buuni oo kulankaa soo xidhay, ayaa hadalladii uu halkaa ka jeediyay waxa ka mid ahaa weedho uu ku dejinayo, isla markaana ugu garaabayo Wasiiradda Qoyska.
Golaha Wakiilada & dooda Xeerka Isgaadhsiinta Somaliland
Hargeysa (Ogaal)- Xeerka Isgaadhsiinta Somaliland oo ay soo curisay Xukumaddu, isla markaana ay dib-u-eegis ku sameeyeen Guddi hoosaadka dhaqaalaha ee Wakiilladu, ayaa shalay la horgeeyay Golaha Wakiillada.Fadhigii shalay ee Golaha Wakiilada Somaliland oo uu guddoominayay Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad Md. Cabdicasiis Maxamed Samaale, ayaa Goluhu Warbixin ka dhegaystay Xoghayaha Guddida dhaqaalaha Md. Maxamed Nuur Caraale (Duur).
“Mudaneyaal waxa idin horyaal Xeerka Isgaadhsiinta Somaliland oo ka mid ahaa Xeerar ay soo gudbisay Xukuumaddu oo khuseeya Isgaadhsiinta. Maadaama oo aan khibrad iyo aqoon laga maarmayn, waxa Wasaaradda Boosaha oo ah Hay’adda soo curisay Xeerkan, waxay guddidu qaban qaabisay kulamo wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen Wasaarada iyo Shirkadaha Isgaadhsiinta.
Kulankaasi oo lagaga arrinsanayay Xeerarka jira, waxa la isla gartay in Xeerkan loo gudbiyo Golaha.” Ayuu yidhi Xil. Duur. Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waxaa kale oo meesha ka maqan cidda ay Ha’yaddani hoos tagto, waayo khaladaadka badan ee Golaha Wakiiladu galay waxaa ka mid ah Ha’yado badan baynu abuurnay, manaynu caddeyn cidda la xisaabtamaysa, Ha’yadda Xeerkani aasaasayaana miisaaniyad bay kharashka qaranka ku yeelanaysaa.
“Sida uu shaaciyay Shirguddoonka Wakiilladu, Doodda Xeerkan oo maanta ka bilaabmi doonta Golaha Wakiillada, ayaa waxa isu-diiwaangeliyay ilaa 18 Xildhibaan.
“UDUB baan ahay, laakiin UDUB-tii aan ahaa ma aha tan Maanta”Xildhibaan Dhaadheere
Hargeysa (Ogaal/Ramaasnews)- Xildhibaan Ibraahim Maxamed Xuseen (Dhaadheere) oo ka tirsan Mudaneyaasha Golaha Wakiilada ee ka soo baxay Xisbul-xaakimka UDUB, isla markaana ka mid ahaa Xildhibaanadii aan ka qaybgelin Shirweynihii labaad ee Xisbigaasi, ayaa natiijadii ka soo baxday Shirkaas iyo habkii loo maamulay ku tilmaamay mid ay dhibi ka iman karto.
Xildhibaan Dhaadheere oo Shirweynahaas iyo maxsuulkii ka soo baxayba ku tilmaamay mid sharci-darro ah, ayaa ka warbixiyay sababta aanu uga qaybgelin Shirweynahaas ee looga reebay, waxaanu ku jawaabay, “Waa su’aasha dadku ay isweydiinayaan ee jawaabteeda la la’yahay, haddiise aan aad u fiirsho, inta badan Xildhibaanadan laga reebay waxay ahaayeen.. oo aan u malaynayaa in tuhun la saaray oo loo maleeyay inay u xaglinayaan Xisbi kale.”
Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Hore ayaan u caddeeyay waxaan u arkaa shirkaa dawladu ay qabatay shir aan ku salaysnayn sharciyada gabigeedaba, sababtu waxa weeye Golaha dhexe ayaa u xilsaaran ergooyinka dibada ka imanaya.
”Xildhibaan Ibraahim Maxamed Xuseen (Dhaadheere) oo xog-waran kooban shalay siiyay Shabakadda Wararka ee Ramaasnews, waxa uu sheegay in Shirweynihii labaad ee Xisbiga UDUB uu qaybiyay taageerayaasha Xisbigaas. “Haddii aan u soo noqdo Shirkaas, dadkii UDUB wuu qeybiyay haddii aan si dhab ah looga hortagin dhib ayaa ka iman karta,”Ayuu yidhi Mudane Dhaadheere.
Mudane Dhaadheere waxa uu naqdiyay Siyaasadda Xisbiga UDUB. “Anigu weli UDUB baan ahay, hawlo badan-na waan la soo galay, laakiin UDUB-tii aan ahaa ma aha ta Maanta. Waanau ku jiraynaa illaa ay ku soo dhacayso dariiqa saxda ah.
Dadkana waxaan leenahay UDUB ninka ku jira lagama saari karo, xaqna qofku wuxuu u leeyahay inuu tilmaamo galdaloolooyinka gedi-socodka xisbiga, nin kasta oo fadhiyay shirweynihii wuu og-yahay wixii jiray.” Ayuu yidhi Xildhibaan Ibraahim-Dhaadheere.Caruur la afduubay oo la helay 20 sano ka dib iyaga oo nool
“Waan ogahay inaanu qof wanaagsan ahayn, laakiin hadana waa aabahay uun”Hooyada caruurta la afduubay
San Jose, California (AP/Ogaal)- Laba waalid oo Maraykan ah ayaa rajaynaya inay dib ula midoobaan inantoodii iyo inankoodii oo la afduubay 20 sannadood ka hor, sida lagu faafiyay shabakada wararka AP.
Caruurtan la sheegay in la afduubay, waxa la helay iyaga oo nool 20 sannadood ka dib xilligii la afduubay, sida laga soo xigtay booliska. Christi iyo Bobby Baskin waxa laga xaday ayaydood iyo awowgood Marvin iyo Sandra Maple sannadkii 1989, balse waxa la ogaaday inay iyagu afduubkaa ka dambeeyeen, xilligaas oo inantu ahayd sideed jir, halka walaalkeedna ka ahaa toddoba jir.
Walaalahani waxa la sheegay inay ku noolaayeen San Jose oo ku taala gobolka California, iyaga oo sida la sheegay sitay magacyo kala ah Jennifer iyo Jonathan Bunting. Inantu waxay immika ka mid tahay golaha fulinta magaaladooda, halka walaalkeedna uu ka yahay nin guursaday oo caruur leh. Aabahood iyo hooyadood Debbie iyo Mark Baskin, ayaa u duulay dhinaca magaalada ay ku nool yihiin iyaga oo rajaynaya inay caruurtooda la midoobaan markii ugu horaysay labaatan sannadood.
Mr Baskin oo arrintaa ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxay cabsi yari iga haysaa waxa ay anaga naga fahansan yihiin, sababta oo ah, waxay masaxdoodu masaxantay 20-kii sannadood.”
Xaaskiisa oo ilmo indhaheeda qoysay ayaa intaa ku dartay: “Waxa naxariis ah in la ogaado iyaga oo nool oo wanaagsan.” Booliska ayaa la sheegay inay xidheen kiiskii afduubka caruurtaas looga haystay Marvin Maple oo 73 jir ahaana caruurta awowgod hooyo, ka dib markii wadahadal laga yeeshay sidii uu afduubkaasi uga dhacay huteel ku yaala San Jose.
Xaaskiisii oo iyana caruurta la afduubay ayeeyo u ahayd ayaa geeriyootay March 2006. Mrs Baskin oo hooyadeed iyo aabeheed ku gacan-dambeeyeen caruurtaas ayaa tidhi, “Ma malayn karo weligay sidaan ugu dhaawacmay caruurtayda, markaa wixii ay igu sameeyeen waxay ahayd uun…..weligay awood umaan yeelan inaan fahmo xataa.” Iyada oo ka hadlaysay aabeheed waxay tidhi:
“Waan ka werwersanahay isaga. Waan ogahay inaanu ahayn qof wanaagsan, laakiin hadana waa aabahay uun, balse waan ka qalbi-jabay. Waxaan u malaynayaa inay nacasnimo u tahay wixii uu sameeyay.”